သဇင်ထူးမြင့်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး အနှောက်ယှက်ပေးနေသူတွေကြောင့် အကူညီတောင်းခံခဲ့တဲ့ ခင်လှိုင် – Cele Zone
သဇင်ထူးမြင့်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး အနှောက်ယှက်ပေးနေသူတွေကြောင့် အကူညီတောင်းခံခဲ့တဲ့ ခင်လှိုင်
ပရိသတ်ကြီးရေ ဟာသ သရုပ်ဆောင်ဦးခင်လှိုင်ရဲ့ အငယ်ဆုံးသမီးလေး သဇင်ထူးမြင့်ကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ် ။ လတ်တလောမှာတော့ သဇင်ထူးမြင့်ဆီကို ဖုန်းဆက်နှောက်ယှက်ပြီး ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းစကားတွေ ပြောနေတဲ့သူတချို့ကြောင့် အလုပ်မှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ် ။
တော်ရုံဆိုဘာမှမပြောဘူး သည်းခံတယ်… သဲကို ၁လပိုင်း ၂၀ဝန်းကျင်တည်းက စဆက်တယ်… မနက်၅နာရီဆက်တယ် သူ့ဖုန်းခေါ်ထားလားဆိုပြီး မခေါ်ဘူး ပြောတာတောင်၁နေကုန်နှောက်ယှက်တယ် ပြီးတော့ဆဲသွားတယ်…အဲ့နေ့ကစပြီးနေ့တိုင်း ၁လုံးစီဆက်တယ်သဲဖန်တွေ သိပါတယ်…သဲလုံးဝမတင်ပဲထားတာ အရမ်းလွန်လာလို့ မနေ့ကဆို ဖုန်း၆လုံးနဲ့ဆက်တယ်…block လို့လည်းမရဘူး ဒီဘက်ကလူတွေကစိတ်တိုတော့ ရိုင်းတယ်ဖြစ်တယ်… အလုပ်မှာလည်း ဖုန်းနဲ့ရိုက်နေတာကို တောက်လျှောက်ဆက်တယ်… ဆက်တဲ့သူအသံလုံးဝမှတ်မိနေပါပြီ… အမြဲစပြောတာ ‘ခုပြောနေတာဘယ်သူလဲ ဘယ်ကလဲ’ စပြောတယ်…အရမ်းရိုးနေပြီ အကွက်တွေ…. ၁လလောက်လိုက်နှောက်ယှက်နေတာသည်းလည်းမခံနိုင်ဘူးဖုန်းနံပါတ်တွေအကုန်မှတ်ထားတယ်…၁ရက်၁လုံးနဲ့၁လတိတိ ဒီအသံကြီးနဲ့ဆက်နေတာ. ဆိုတဲ့စာသားနဲ့အတူ သဲတစ်ယောက် သူမရဲ့အခက်ခဲတွေကို ပရိသတ်တွေကို ဖွင့်ဟလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
ဦးခင်လှိုင်ကလည်း ဒီဖုန်းတွေနဲ့ကျွန်တော့်သမီးဖုန်းကိုအမြဲဆက်ပြီး ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းတွေဆဲနေတယ်ယောက်ျားအသံ မိန်းမအသံ တွေနဲ့နှောက်ရှက်နေပါတယ် ကူညီပြီးစုံစမ်းပေးကြပါဗျာ သမီးမှာဘာရန်ငြိုးမှမရှိပါဘူးသမီးအလုပ် လုပ်နေတာအနှောက်အယှက်ဖြစ်ရပါတယ် ဆိုတဲ့စာသားနဲ့အတူ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့် ပရိသတ်တွေကို အကူညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ် ။
သဇင္ထူးျမင့္ကို ဖုန္းဆက္ၿပီး အေႏွာက္ယွက္ေပးေနသူေတြေၾကာင့္ အကူညီေတာင္းခံခဲ့တဲ့ ခင္လိႈင္
ပရိသတ္ႀကီးေရ ဟာသ သ႐ုပ္ေဆာင္ဦးခင္လိႈင္ရဲ႕ အငယ္ဆံုးသမီးေလး သဇင္ထူးျမင့္ကေတာ့ အႏုပညာအလုပ္ေတြကို လုပ္ကိုင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္ ။ လတ္တေလာမွာေတာ့ သဇင္ထူးျမင့္ဆီကို ဖုန္းဆက္ေႏွာက္ယွက္ၿပီး ႐ိုင္း႐ိုင္းစိုင္းစိုင္းစကားေတြ ေျပာေနတဲ့သူတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ အလုပ္မွာအေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေနရတယ္လို႕သိရပါတယ္ ။
ေတာ္႐ုံဆိုဘာမွမေျပာဘူး သည္းခံတယ္… သဲကို ၁လပ္ိုင္း ၂၀ဝန္းက်င္တည္းက စဆက္တယ္… မနက္၅နာရီဆက္တယ္ သူ ့ဖုန္းေခၚထားလားဆိုၿပီး မေခၚဘူး ေျပာတာေတာင္၁ေနကုန္ေႏွာက္ယွက္တယ္ ၿပီးေတာ့ဆဲသြားတယ္…အဲ့ေန ့ကစၿပီးေန ့တိုင္း ၁လံုးစီဆက္တယ္
သဲဖန္ေတြ သိပါတယ္…သဲလံုးဝမတင္ပဲထားတာ အရမ္းလြန္လာလို့မေန ့ကဆို ဖုန္း၆လံုးနဲ ့ဆက္တယ္…block လို ့လည္းမရဘူး ဒီဘက္ကလူေတြကစိတ္တိုေတာ့ ႐ိုင္းတယ္ျဖစ္တယ္… အလုပ္မွာလည္း ဖုန္းနဲ ့႐ိုက္ေနတာကို ေတာက္ေလွ်ာက္ဆက္တယ္… ဆက္တဲ့သူအသံလံုးဝမွတ္မိေနပါၿပီ… အၿမဲစေျပာတာ ‘ခုေျပာေနတာဘယ္သူလဲ ဘယ္ကလဲ’ စေျပာတယ္…အရမ္း႐ိုးေနၿပီ အကြက္ေတြ…. ၁လေလာက္လိုက္ေႏွာက္ယွက္ေနတာသည္းလည္းမခံႏိုင္ဘူးဖုန္းနံပါတ္ေတြအကုန္မွတ္ထားတယ္…၁ရက္၁လံုးနဲ ့၁လတိတိ ဒီအသံႀကီးနဲ ့ဆက္ေနတာ. ဆိုတဲ့စာသားနဲ႕အတူ သဲတစ္ေယာက္ သူမရဲ႕အခက္ခဲေတြကို ပရိသတ္ေတြကို ဖြင့္ဟလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ။
ဦးခင္လိႈင္ကလည္း ဒီဖုန္းေတြနဲ႔ကြၽန္ေတာ့္သမီးဖုန္းကိုအၿမဲဆက္ၿပီး ႐ိုင္း႐ိုင္းစိုင္းစိုင္းေတြဆဲေနတယ္ေယာက္်ားအသံ မိန္းမအသံ ေတြနဲ႔ေႏွာက္ရွက္ေနပါတယ္ ကူညီၿပီးစုံစမ္းေပးၾကပါဗ်ာ သမီးမွာဘာရန္ၿငိဳးမွမရွိပါဘူးသမီးအလုပ္ လုပ္ေနတာအေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ရပါတယ္ ဆိုတဲ့စာသားနဲ႕အတူ သူ႕ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေနတဆင့္ ပရိသတ္ေတြကို အကူညီေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္ ။
ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ နာရေးကို လာမေးကြတိုင်း အတိုင်းမသိ နာကျင်ရတာလို့ စာနာပေးဖို့ တောင်းဆိုလာတဲ့ ရွေရည်သိန်းတန်
ခင်ပွန်းရှိတဲ့ဘန်ကောက်ကို သားလေးနဲ့အတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လိုက်သွားတော့မယ့်အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ပိုးအိအိခန့်
သီချင်းလေးကို စောင့်မျှော်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေကို Vlogs လေးနဲ့ အရင်ချော့လိုက်တဲ့ အက်စတာ